By Htet Wai Aung - August 29, 2016
ThanLwin Font. Today Update language in Myanmar. Such as Myanmar , Shan, PaOh, Karen, Mon, Palaun, :-D ThanLwin Font For Vivo Theme https://app.box.com/s/swaelxco0zp1xc32tuzxlecl247coqxs ------------------------------------------- ThanLwin Font For iOS https://app.box.com/s/2k79llqvntlz35efntjxwse36lm4rvls _----------------------------------------- ThanLwin Font For Android https://app.box.com/s/shjt1tlkehyjmbgehekwtwf26rzt39nk By Khon Soe Zaw Thu
Unicode to Zawgyi Zawgyi to Unicode အပြန်အလှန် ပြောင်းပေးတဲ့ Converter ပါ https ://itunes.apple.com/us/app/id1146576281
Keyboard >>> For PaOh ★ Fonts Style For Myanmar User★ Myanmar Notes isasimple notpad app. It isagood helper to manage your schedules and notes. It gives youaquick and simple notepad editing experience when you write notes , memos , e-mails , information , shopping lists and to-do. Color Note Notepad makes takinganote more easier than any other notepad and memo applications. Support Myanmar Language and Chinese. ★ Fonts Style For Myanmar User★ Myanmar font 45 မျိုးပါပါသည်။ Download >>> Myanmar Note https://app.box.com/s/4r3ce1vab0ac3ix01mer2s9ors570peq Download >>> Myanmar PaOh Keyboard >>> https://app.box.com/s/yygflz0fd3017s35218mv6enzne79tk1 အဆင်ပြေကြပါစေ
ဒီလောက်ထိ စာအများကြီး တခါမှမရေးဖူးပါဘူး။ ကျွန်တော် အရင်ကတည်းက ရှင်းပြချင်နေတာလေးတွေမို့ ဒီတခါတော့ ကြိုးစားပြီး ရေးထားတယ်။ unicode သမားတွေကို ကျွန်တော် ရန်လုပ်ခဲ့တာတွေဆဲခဲ့တာတွေလည်း ပါပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းမှာပါ။ စပြောရရင် လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်ခွဲလောက်က ဗိုက်ခဏခဏ အောင့်တာနဲ့ ဘာ ဆေးမီးတိုသုံးရမလဲ google ကနေရှာတာက စတာပဲ။ ဆေးမီးတိုကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လို ခေါ်မှန်း ကျွန်တော် မသိခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ့ home cure chest pain ဆိုပြီးရှာတယ်။ home remedies ဆိုတာတွေအများကြီးကျလာတယ်။ home cure လို့ရှာတာနဲ့ google က home remedies ကိုလိုချင်နေမှန်း ဘယ်လိုလုပ် သိတာပါလိမ့်။ သေချာတယ် google က အင်္ဂလိပ်စာ နားလည်လို့ပဲ။ ဒီလိုပုံစံတူ အင်္ဂလိပ်စာကိုသုံးပြီး google မှာလွယ်လွယ်ရှာလို့ရမှန်း အများသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဟုတ်ပြီ home remedies ဆိုတာတော့ တွေ့ပြီ။ အင်္ဂလိပ်လို ဟိုအပင် ဒီအပင် ရေးထားတာတွေလည်း ကျွန်တော်မသိပြန်ဘူး။ ဘာပင်တွေမှန်းလည်း မသိဘူး။ သူတို့ပြောထားတဲ့အပင်တွေကို စကားလုံးလေး copy ကူး။ ပုံအနေနဲ့ပြန်ရှာကြည့်တယ်။ ပုံမြင်ရတောင် ဘာမှန်းမသဲကွဲပြန်ဘူး။ ဒီတော့ မြန်မာ လိုလေး ရှာလို့ရရင် ပိုမကောင်းဘူးလားဗျာ။
ယနေ့ခေတ် အင်တာနက်တွင် အသုံးပြုနေသော မြန်မာစာစနစ်တွင် “ဇော်ဂျီ” နှင့် “မြန်မာယူနီကုဒ်” ဟူ၍ စနစ် နှစ်မျိုး ကွဲလျှက် ရှိပါသည်။ ဇော်ဂျီ အသုံးပြုသူများမှာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိနေပြီး မြန်မာယူနီကုဒ်စနစ် အသုံးပြုသူမှာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိပါသည်။ စနစ်နှစ်ခုကြားက ပြဿနာ ဇော်ဂျီ နှင့် ယူနီကုဒ် စနစ်နှစ်ခုတွင် တစ်ခုကို အသုံးပြုပါက နောက်တစ်ခုနှင့် ရေးသားထားသော စာများကို ဖတ်ရှုရာတွင် မှန်ကန်စွာ မပြနိုင်ခြင်း ပြဿနာ ရှိပါသည်။ ထိုသို့ စနစ်နှစ်ခု ကွဲပြားနေမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ နည်းပညာလောက တိုးတက်ပြောင်းလဲရေးကို များစွာ နှောင့်နှေးစေသလို သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဝေရာတွင်လည်း အခက်အခဲဖြစ်စေပါသည်။ စနစ်နှစ်ခုမှ စနစ်တစ်ခုတည်းဆီသို့ စနစ်နှစ်ခုသည် နည်းပညာအရ မဟုတ်ဘဲ သဘောတရားအရ [Code point ပြဿနာ] ပေါင်းစည်းရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ပိုကောင်းသော စနစ်တစ်ခုတည်းသာ အသုံးပြုရန် ရှိပါတော့သည်။ ဘယ်စနစ်က ပိုကောင်းသလဲ ပိုကောင်းတဲ့ စနစ်တစ်ခုတည်းကိုပဲ ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် ထိုစနစ်နှစ်ခု၏ အားနည်းချက် အားသာချက်များကို ချိန်ထိုးသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ မူပိုင်ခွင့် (Copyright) ဇော်ဂျီ မြန်မာယူနီ
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ယူနီကုဒ် က မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေပါတယ်။ အခြားသော ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး စွမ်းအင်ကိစ္စမျိုးတွေက အရေးကြီးသိလို ဒီကိစ္စကလည်း အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ကို နိုင်ငံရေးလုပ်နေကြသူတွေ လက်ခံစေချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများ ကမရောင်ရာဆီလူးတယ်။ အလုပ်မရှိကြောင်ရေချိုးနေကြသူများဆိုပြီး ယူနီကုဒ်ဆိုတာမရှိလည်းဖြစ်တယ်။ နောက်မှ လုပ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးခဏခဏပြောနေကြတာမြင်တော့ ကျွန်တော်တော်တော်ခံစားရပါတယ်။ အခုပဲရေးလို့ဖတ်လို့ရနေရင် အဆင်ပြေပြီလေ ဒီထက် ဘာများပိုထက်လိုသေးလို့လည်းဆိုတဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ပြောနေကြတာမြင်တော့ ကျွန်တော့်မှာ ပြောစရာစကားတွေဆွံ့အလို့နေတယ်။ ကျွန်တော်အောက်မှာဆက်လက်ပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာက ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ စံစနစ်တစ်ခုကိုအရေးတကြီးလိုအပ်သလဲဆိုတာလေးတွေ ဥပမာတွေနဲ့ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ်လောက်က ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာအရမ်းရူးသွပ်သူတစ်ဦးပါ။ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က ခေတ်မီတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တော့မဟုတ်လားဘူး။ မထင်မရှားနယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာ ကလေးဘဝကုန်ဆုံးခဲ့ရတာပေါ့။ ကွန်ပျူတာဆိုတာစကိုင်ဘူး။ အင်တာနက်ဆိုတာတွေမြင်ဖူးနေတော့ ကျွန်တော် တန်းတန်းစွဲဖြစ်ခဲ့
အရင်က............ ကွန်ပျူတာက မြန်မာစာဆိုရင် က ခ ဂ ဃ င ... အစဉ်လိုက်ဆိုတာတောင် သိတာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး မြန်မာစာက မြန်မာအဘိဓာန်စဉ်တဲ့နေရာမှာ က-ကြီး ပြီးရင် ခ-ခွေး တန်း မလာဘူး၊ အဲဒီ ပင်မအက္ခရာ က-ကြီးရဲ့ လေးဘက်လေးတန်ကနေ ((ေြ - ျိီွှံ့ုူုူာါ -် )) တွဲလာနိုင်စရာတွေက အများကြီး၊ တခါ.... ကွန်ပျူတာပေါ်မှာက ယ-ရစ်တခုထဲကိုပဲ ၈မျိုးရှိတယ်။ အောက်မြစ်၊ ယ-ပင့်၊ ၁-ချောင်းငင်၂-ချောင်းငင် ... စတာတွေကလည်း ၂မျိုး ၃မျိုး..။ ဆိုတော့... Excel မှာ Filter နဲ့ တစ်သုတ်ချင်း ဆွဲထုတ်ပြီး Manual ပြန်စဉ်ရင်တော့ ရတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ မောက်စ်ကလစ် တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပြီးမယ့်အလုပ်မျိုးကို ကိုယ့်မြန်မာစာမှာ ဇယားကြီးရင် ကြီးသလောက် အချိန်အများကြီး ပေးရလိမ့်မယ်။ ပုံက.... Excel မှာ ဇော်ဂျီ၊ ဝင်း နဲ့ ယူနီကုဒ်တွေသုံးထားတဲ့ နာမည်စာရင်းကို Sort တစ်ချက်စီ နှိပ်ကြည့်ထားတာပါ။ ပထမကော်လံမှာ ဇော်ဂျီဖွန့်သုံးထားလို့ အဖြေမှန် မရပါ။ ဒုတိယကော်လံ ဝင်းဖွန့် သုံးတဲ့အခါမှာလည်း အင်္ဂလိပ်လက်ကွက်နဲ့ ဖလှယ်ပြီး A to Z စီတဲ့အတွက် အဖြေမမှန်ပါ။ တတိယကော်လံမှာ ယူ
အသုံးမကျတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက mobile operators တွေရဲ့ အသုံးမကျတဲ့ font နဲ့ပို့တဲ့ messages တွေကြောင့် ယူနီကုဒ်ပဲရတဲ့ဖုန်းတွေမှာ ဖတ်မရဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဒီ SMS app လေးသုံးပါ။ https://play.google.com/store/apps/details?id=me.myatminsoe.myansms
အရင်တုန်းက ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ဇော်ဂျီနဲ့မှတ်ထားပြီး အခု ပြောင်းလဲချိန်တန်လို့ ယူနီကုဒ်ကို ပြောင်းတဲ့အခါ အရင်က ဇော်ဂျီနဲ့ရေးထားတဲ့ contact တွေကို ယူနီကုဒ်နဲ့ ပြောင်းပေးဖို့ အတွက်ဆို Android မှာ ဒီ app လေးက အသုံးဝင်ပါတယ်။ https://play.google.com/store/apps/details?id=aungkyawpaing.unicontactconverter Mirror link https://drive.google.com/file/d/13Q_4_qyja6_yCbcWCe8I7DG3fr_BgX-P/view?usp=drivesdk
https://www.youtube.com/watch?v=G4BvpuUD5rM&list=LLWM-YBOZ4i52veEB0E3cnPg&index=15 cr: ကိုနေဇာ
Myanmar Unicode for iOS 8 ------------------------------------- https://www.facebook.com/notes/myanmar-unicode-area/myanamr-unicode-for-ios-8/951537501523423 MUA Keyboard Pack Guide.pdf ------------------------------------------- https://www.facebook.com/groups/mmUnicode/950095568334283/ KeyMagic-1.5.1-Installer ------------------------------------- https://www.facebook.com/groups/mmUnicode/948818745128632/ myanmar-font-tagger update for firefox pc version -------------------------------------------------------------------- https://www.facebook.com/groups/mmUnicode/948731905137316/ Myanmar Unicode in OS X ---------------------------------------- http://guides.mmunicode.org/index.php/Mac_OS_X Windows 8 ----------------- http://guides.mmunicode.org/index.php/Windows_8_%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA_Default_%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%AC_%E1%80%9A%E1%80%B0%E1%80%94%E1%80%AE%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%92%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%94%E1%80%
https://app.box.com/s/mva29i35622gokenjg2710vqk2s654de By Khon Soe Zaw Thu
By Htet Wai Aung - August 20, 2016
ညီငယ်ရေ၊ တကယ်ကျတော့ Unicode စနစ်ရဲ့ ကောင်းကွက်တွေက အများကြီးကွ။ မင်းပြောတာတွေ အပြင် တခြားပြောစရာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်ဟ။ အဲဒီအထဲက နှစ်သက်မိတာလေး တစ်ခုကိုပဲ ပြောဦးမယ်ဟေ့။ အဲဒါကတော့ - မြန်မာစကားလုံးတွေရဲ့ အသံထွက် သဘောတရားကို နည်းနည်းလေး အလင်းပြသွားတာကိုပါ။ (BTW, အဲဒီလို အလင်းပြသွားတဲ့အတွက် ပါဠိစာတွေမြင်ရင် ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို မဖတ်ရဲတဲ့ သူတွေကို အများကြီးမက အပြည့်အဝကို ကူညီပေးသွားတယ်ဆိုတာကလည်း ကောင်းကွက်တစ်ခုပဲကွ။) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ - Unicode စာရိုက်စနစ်နဲ့ပတ်သတ်လို့ ခဏခဏ ကြားဖူးကြတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်း ရှိတယ်လေ။ Unicode မှာ စာရိုက်စနစ် (၂) မျိုး ရှိတဲ့အထဲက Window 10 မှာ ပါလာတဲ့ စနစ်က Phonetic order နဲ့ ရိုက်တဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်- ဆိုတာကိုလေ။ အသံထွက်စနစ်နဲ့ ရိုက်တဲ့စနစ်ပဲဆိုတာ ညီငယ်လည်း ကြားဖူးနားဝ ရှိပြီးသားနေမှာပါ။ ဘယ်လို အသံထွက်စနစ်လဲ-ဆိုတော့ ယုတ္တိအရှိဆုံးလို့ ထင်ရတဲ့ အသံထွက်အစဉ်ကို ဦးစားပေးပြီး ရိုက်ရတဲ့စနစ်ပေါ့ကွာ။ ဥပမာ - တုံ -ဆိုပါတော့။ -ုံ (အုံ) ဆိုတဲ့ စကားသံထွက်လာဖို့အတွက် သဘာဝကျတဲ့ အသံပေါင်းစပ်မှုကို စဉ်းစားကြည့်ရင် တုန်၊ ကုန်၊ ခုန် ဆိုတာတွေနဲ့ နီးစပ်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။ (အဲ
မင်္ဂလာပါ ဇော်ဂျီအသုံးပြုသူများ သင့်အနေဖြင့် ဝင်းဒိုးတွင် ယူနီကုဒ် အသုံးပြုချင်လျှင် အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ.. သင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မည်.. Windows မှာ မြန်မာယူနီကုတ် ကို အသုံးပြုချင်သူများအတွက် နည်းလမ်းများနဲ့ အမှန်မထင် ကြုံတွေ့လေ့ရှိတဲ့ အခက်အခဲများကို အောက်မှာ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်... Windows မှာ မြန်မာယူနီကုဒ် ထည့်နည်းနှင့် ထည့်တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်တတ်သော အခက်အခဲများ။ အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးပါ။ ၁။ ယူနီကုဒ်ဖောင့် တခုခုကို ဒေါင်းပြီး install လုပ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ ဖောင့်များသည် Unicode စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အပြည့်အဝ လိုက်နာသော ဖောင့်များဖြစ်သဖြင့် မိမိစက်အတွင်း ၎င်းဖောင့်များတစ်ခုခုရှိနေရုံမျှဖြင့် မည်သည့် Unicode စာသားများကိုမဆို ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်... (က) PyidaungSu Font ဗမာ, သက္ကတ/ပါဠိ, မွန်, ရှမ်း, စကောကရင်, ပိုးကရင်(အနောက်ပိုင်း), ပိုးကရင် (အရှေ့ပိုင်း), ပအိုဝ်း, ကယား, အရှိုချင်း, ပလေးပလောင်, ရူမာည်းတအောင်း,ခန္တီးရှမ်း, Aiton & Phake, တိုင်းလျမ်ခေါ်ရှမ်းနီ, ရွှေပလောင်.) ဒေါင်းလုဒ်လင့် -- http://goo.gl/hz9MvA ( ခ) Myanmar3Font (တိုင်းရင်းသားစာမျ